Ukukhohlwa kwe-Aluminium nge-high-spe
Izithuthi ze-aluminium zokuxolelwa
Aluminium forgings yendwangu
I-Aluminium forgings yesithuthuthu
Enye i-aluminium i-forg
Ukuzenzekelayo imishini izesekeli
Izindiza ze-aluminium zokukhohlwa
I-aluminium yezimboni i-forg
Izinsiza zemoto yekhebula
Aluminium ingxubevange extrusion
I-Kunshan Chenshun Aluminium UKWAKHA Co., LTD
I-Kunshan Quanshun aluminium Forging Co., LTD., Eyasungulwa ngonyaka ka-2000, inezinkampani ezintathu, okungukuthi, i-Kunshan Quanshun Aluminium, i-Kunshan Quanshun Aluminium ekwakheni co., LTD., Ne-Kunshan Quanshun Auto aluminium izingxenye Co, LTD., Ezinonyaka okukhipha inani lama-yuan ayizigidi ezingama-200. Ingabe iqoqo le-aluminium extrusion, i-aluminium alloy processing, ukuthuthukiswa kwezingxenye ze-aluminium zezimoto njengenye yamabhizinisi ahlanganisiwe. Le nkampani ihlanganisa indawo 150 mu, ne 100,000 metres square workshop, abasebenzi 150 kanye yokuthengisa wonyaka yuan million 200.
Le nkampani inamandla amakhulu kwezobuchwepheshe, enabaphathi abasezingeni eliphakeme, ubuchwepheshe, ukuhlolwa, ithimba lokukhiqiza, ngokuya ngezidingo zokusebenza kwamakhasimende ezimbonini ezahlukahlukene zokuhlinzeka ngemikhiqizo, ukuthuthukiswa kwemikhiqizo eyahlukahlukene, ubuchwepheshe bokucubungula obuhlukahlukene be- izingxenye ze-aluminium zekhwalithi. Isetshenziswa kabanzi ezimotweni, isithuthuthu, amandla kagesi, ujantshi onesivinini esikhulu, imboni yezempi, umshini wokuphotha nezinye izimboni.
Le nkampani inohlelo oluphelele nolusebenzayo lokuqinisekisa ikhwalithi kanye nobuchwepheshe bokukhiqiza nokucubungula obunokwethenjelwa, onamathani ayi-1650, amathani ayi-800 omshini wokukhipha i-extrusion, angakhiqiza imininingwane ehlukahlukene ye-aluminium alloy bar, irowu, iphrofayili; Ngamathani ayi-1600, amathani ayi-1000, amathani angama-630, amathani angama-400, amathani angama-300 amasethi ayi-10 njengokucindezelwa komshini, angakhiqiza u-5 mm ~ 800 mm, Ø Ø aluminium forgings; Ifreyimu yokufa esezingeni eliphakeme, ukwelashwa kokushisa, ukucima, ukuguga, ukukhethwa kwezinto ezibonakalayo kanye ne-CNC CNC isikhungo neminye imishini ingahlangabezana nokuthuthukiswa kwesikhunta sekhasimende kanye nezidingo zokuqedela umkhiqizo. Londoloza izindleko zokukhiqiza nezokuthutha ngezinga eliphezulu ukuhlangabezana nokufunwa kwamakhasimende.
UQuanshun uphasile futhi walusebenzisa ngokuqinile uhlelo lwekhwalithi ye-ISO9001: 2000, futhi unamathela kunqubomgomo yekhwalithi ye- "ikhwalithi esezingeni eliphakeme, ikhredithi, ubuchule nokwenza ngcono okuqhubekayo". Ngaso sonke isikhathi ihlinzeka amakhasimende ngemikhiqizo nezinsizakalo ezisezingeni eliphakeme ezihlangabezana nezidingo zazo, ngaleyo ndlela zithole ukuqashelwa nokwethenjwa kwamakhasimende. Amabhizinisi asekhaya amakhulu naphakathi nendawo afana neGiant, i-Oricombamag, iLuo Group, i-Ningbo Top Group, i-Hetian Industrial, i-Zero MotoCYcl, i-Ensto isungule ubudlelwane besikhathi eside futhi obuzinzile bokusebenzisana nathi. Izimakethe zomhlaba wonke nazo zanda ngokushesha. Imikhiqizo ithengisa kahle eYurophu naseMelika, eningizimu-mpumalanga ye-Asia.
Samukela ngobuqotho amakhasimende avela ekhaya nakwamanye amazwe ukuthi avakashele futhi axoxisane ngebhizinisi, futhi asebenze ndawonye ukuze abe nekusasa elingcono.
IMPAHLA YOKUFUNDELA I-ALUMINUM YOKUFUNDELA
Sineqembu eliqinile lokuklama le-r & D, elingakunikeza nge-designone-stop design yensizakalo yomkhiqizo.
Sinohlelo oluqinile futhi oluphelele lwangemva kokuthengisa, ukuze ukukhiqizwa nokuthengisa kungabi nazinkathazo.
Sinemishini ephelele yokuhlola kanye nochwepheshe bokuhlola ukuqinisekisa ukuthi yonke ingxenye yomkhiqizo wakho iyimikhiqizo efanelekile.